musha Europe Politicians Emmanuel Macron Childhood Story Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeChiturika cheFrance chinonyatsozivikanwa nezita rezita rezita “Manu". Our Emmanuel Macron Childhood Story uye Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwake. Zvimwe zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva iye ndiye musikana mukuru pane yose muFrance. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Emmanuel Macron's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Emmanuel Macron Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron akaberekwa pa 21st musi waDecember 1977 paAmiens kuFrance. Akanga ari mukuru pane vana vatatu vakazvarwa naamai vake Françoise Macron-Nogues (chiremba) uye kuna baba vake Jean-Michel Macron (purofesa wehutano).
Emmanuel Macron Vabereki Jean-Michel Macron naFrançoise Noguès.
Nezvemhuri yake, Macron inyika yeFrench yeFrance yehurudzi neChirungu neScotland. Zvinyorwa zvakare zvinoratidza kuti sekuru vake baba vakuru, Robertson LeBlond vaiva gamba rehondo reBrithani rairwisana kuchamhembe kweFrance panguva Hondo yeSomme uye akazoroora mukadzi wechiFrance, Suzanne LeBlond (Amai Macron's grandmother) vasati vanyangarika kuLondon.
Macron akarerwa muKaturike kuAmiens uko akakurira pamwe nevanin'ina vake Laurent (mukoma) naEstelle (hanzvadzi). Kunyange zvazvo vabereki vake vaiva vashandi vezvokurapa, vakagamuchira mari shoma yehurumende yezvemari yakaita kuti vanyatsogadziriswa nemakiromita emapakati.
Macron akarererwa muKaturike kuAmiens.
Emmanuel Macron Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Kukura paAmiens, wechidiki Macron aiva mwana akachenjera uyo akasarudza kushandisa nguva yakanaka nevarume vakuru panzvimbo yekurembera nevana vezera rake. Saizvozvowo, akave neukama hwepedyo namai vake vamai vake, Manette avo vakamudzidzisa mafungiro eLeftist uye vakasimbisa chido chemazuva ano chemabhuku.
Emmanuel Macron aive akangwara mwana akakura achida mabhuku.
Somugumisiro, kufambira mberi kwepfungwa kwakava chiratidzo cheMacron uyo anoita seanochera achiri kuyaruka munguva yepakutanga kwemazuva ake. Akanga achiwanzowanika achibatana uye achidya kudya nevadzidzisi vake mune imwe nzvimbo yechikoro yeJesuit La Providence asati apedza chikoro chake chesekondari paEric Lycée Henri IV muParis.
Macron akapedza dzidzo yake yechikoro chesekondari kuLycée Henri IV muParis.
Paakapedza kudzidza, Macron akaenda kuYunivhesiti yeParis-Ouest Nanterre La Défense kwaakawana degree rake rekutanga muFilosofi. Akazounza zvidzidzo zvepamusoro pakamira mushure mekuwana dhigirii ra master mune zveveruzhinji kubva kuParis Institute of Political Study.
VERENGA Benjamin Netanyahu Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts
Achienderera mberi nebasa rekuvaka, Macron aida kutanga basa rake nevashandi vehurumende nekudaro akazviwanira kudzidziswa kuEcole Nationale d'Administration (ENA) kwaakapedza kudzidza mu2004.
Emmanuel Macron Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Yokutanga paMacron's cruise career yaiva muFrance General Inspectorate yeMari apo yaive mutevedzeri we rapporteur we bipartisan commission. Yakanga iri pa inspectorate iyo Macron yakasimbisa ukama hwepedyo naJacques Attali uyo anofamba katatu semumwe wekuFrance aive akakurumbira wezvematongerwo enyika, nyanzvi yezvemari uye mutungamiri wekuimbova Mutungamiri weFrance François Mitterrand.
Mudiki Macron akatanga basa rake muvashandi vehurumende muna 2004.
Attali yaizotamba yakatsoropodza zvematongerwo enyika uye zvemari ekudzidzisa mabasa muhupenyu hweMacron kutanga nekukurudzira wezvematongerwo enyika prodigy kujoina Rothschild & CIE Banque. Ndichiri kubhangi, Macron akarekodha kusimuka nekukurumidza kuburikidza nemazita kuti ave mumwe weanoshanda mubhangi.
Emmanuel Macron Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Kuedza kwekupedzisira kwakaona Macron akasiya basa rake rekubhadhara rakakwirira kwazvo mubhangi kuti aite zvematongerwe enyika. Hazvina nguva refu asati abatanidzwa neSocialist Party mu2006 uye akawana basa rakakura mumutambo wekutanga weMutungamiri François Hollande semutevedzeri munyori mukuru weElysée presidential palace.
Makore gare gare, mutungamiri wemakore we37 akasarudzwa mushumiri wechidiki muFrance wehupfumi, chigaro chaakataurirawo pamusana pekuwedzerwa kwekuwedzera kwake nemutungamiri wehurumende Hollande uyewo chido chake chekusimbisa chikonzero chezana remakore rezvematongerwe enyika, En Marche iyo yaakagadzira mu 2016.
Macron akatanga musangano wezvematongerwo enyika wezana La République En Marche! musi wa6 Kubvumbi 2016.
Emmanuel Macron Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
MunaNovember gore iroro, Macron akazivisa chido chake chokumhanyira mutungamiriri wenyika pachikuva cheEn Marche. Kubvuma kwake uye kugadziriswa kwakasununguka kwakagamuchirwa nevakawanda vaitendawo kuti nguva yemasangano akasimbiswa, zvikurukuru sangano reSocialist Party rakapera.
Macron yakakunda mbiri yekutanga neyechipiri yechisarudzo chemuongorori pamberi pe Marine Le Pen we National Front. Akafanirwa kutungamira saMutungamiri weFrance mushure mokunge avhurika pa 14th yaMay 2017.
VERENGA Robert Mugabe Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Emmanuel Macron akapika seMutungamiriri weFrance pa14th yaMay 2017.
Emmanuel Macron Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Emmanuel Macron murume akaroora. Tinokuunzira mashoko echokwadi nezve nhoroondo yake yekufambidzana uye hupenyu hwewanano kusanganisira masanganiro aakaita nekusaroora mukadzi wake. Kutanga kuenda, kwave nemukadzi mumwe chete munyaya yerudo yaMacron uye haasi mumwe munhu kunze kwaBrigitte Macron. Macron akasangana naBrigitte pachikoro chevaJesuit La Providence kwaaive mudzidzisi wake wedrama. Akanga ari 15 panguva iyoyo apo mudzidzisi wake akachinja rudo kufarira yaive 39!.
Iyo nguva Emmanuel Macron, ane makore gumi nemashanu, nyeredzi mumutambo wechikoro uye kutsvoda mudzidzisi, 15, anozove mukadzi wake.
Mhirizhonga dzave dzakaswedera pedyo zvisinei nokuti Brigitte akaroora panguva iyoyo uye akava nevana vatatu nemuduku kuna vose mukunda weMacron's age. Kune rumwe rutivi, vabereki vaMacron vakatsvaga kukanganisa ukama hwavo nokumutumira kuti adzidze kuLycée Henri IV muParis. Kunyange zvakadaro, Macron ane makore ane makore gumi nemana, akavimbisa mudzimai wake kuti ndiye aizomuroora zvisinei kuti chii chinouya pakati pavo.
Vakazopedzisira vakaroorana musi we 20th waOctober 2007 mushure mokunge Brigitte akaroora murume wake wekare Louis Auziere mu 2006. Kunyange zvazvo pasina mwana akaberekwa nemuchato, Macron anogona kunyanya kufungwa kuti ndiye baba vokurera vevana vatatu vaBrigitte, Sebastien, Tiphaine uye Lawrence.
Hapana mwana akazvarwa nemuchato waMacron naBrigitte.
Emmanuel Macron Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Macron akaberekerwa mumhuri ye5. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Pamusoro paamai vaMacron: Françoise Noguès ndiMacron's mum. Akaberekwa mugore re1950 uye anoshanda sechiremba ne Social Security. Amai vevatatu vave vakaparadzana nemurume wavo kubvira 2010 uye zvishoma zvataurwa naMacron uyo anoda kunyanya kutaura nezvemakuru vake. Kunyangwe zvakadaro, akanga aripo pakusunungurwa kwemwanakomana wake mukuru kuti amutsigire sezvaakaisa zvikepe zvehupenyu hwose hutsva.
Macron kashoma kutaura nemufaro pamusoro paamai vake Françoise Noguès.
Pamusoro paBaba vaMacron: Jean-Michel ndiye baba vaMacron vakadzidza. Akaberekerwa mu1950 uye anoshanda sechiremba uye purofesa paYunivhesiti yeParardy. Mushure mokurambana naamai vaMacron muna 2010, Jean akazoroora kune chiremba chepfungwa achiziva saHélène Joly. Jean aigara ari pedyo nemwanakomana wake ane zvaanofarira. Anodzingawo mishumo inotaura kuti akashanda kunokonzera ukama hwaMacron naBrigitte.
VERENGA Yemi Osinbajo Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Baba vaMacron chiremba wetsinga uye mudzidzi.
Pamusoro pevana vaMacron: Macron ane vanin'ina vaviri; imwe hanzvadzi Laurent pamwe chete nehanzvadzi duku Estelle. Laurent naMacron vakakurira pamwe chete kuAmiens uye vaigara pamwe chete muParis sevadzidzi. Anoshanda sehupenyu hwehutano hwehutano uye anotenda kuti ari pedyo nemukuru wake anozivikanwa hama.
Munin'ina waMacron mudiki Laurent ndeyemwoyo radiologist.
Estelle, kune rumwe rutivi, ndiye hanzvadzi yekupedzisira yaMacron uye anotsigira. Anoshanda sanephrologist mudunhu reTououse uko kwaanogara nemurume wake Carl Franjo.
Emmanuel Macron Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Macron ndiye munyengeri anonyengetedza uyo anozivikanwa nekukwanisa kwake kugutsa vanhu. Aiwanzogadzirisa ruvara rwebhuruu rwakanyanya pavanopindirana uye zvishoma nezvishoma akavaka gakava reCartesian kusvikira apedza.
Murume wechiFrench uyo anokwezva neruzivo uye vanhu vane ruzivo haasisina simba rekudzinga vakadzi. Uyewo haanzwi kudiwa kwekudya uye kurara sezvaanowanzomiririra mubasa.
Kufambira mberi kune nyaya dzekutenda, Macron ndeyegnostic asi inoratidza kuonga kweKaturike. Nezvekuzvivaraidza kwake, Macron anofara zvikuru mukurira piyano uye tennis.
Emmanuel Macron Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Untold Career Facts
Macron akaita mamirioni ake ekutanga achishanda semubatsiri mubhangi naRothschild & CIE Banque pakati pa2010 - 2012.
Aimbove mudzidzi kumumiriri weFrance muAbuja mu2000 pamwe nekugara achishanya kuAfrica Shrine muLagos Nigeria.
Macron muLagos Nigeria munguva yekutanga 2000.
Kubva zvaakapedza kudzidza kuEcole Nationale d'Administration (ENA) mu2004, Macron yakaramba kuita isingasvike pamabasa maviri, 2 bato rezvematongerwo enyika uye akasiya basa pamabasa maviri muhurumende.
Macron ndiye mutungamiri wekune imwe nyika wokutanga kutarisa mutungamiri weUnited States Donald Trump muWashington DC
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Emmanuel Macron Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!